रोचक / घोचक Archives - नेपाल कुरा
रोचक / घोचक गृहपृष्ठमा जानुहोस् :
संसारकै सबैभन्दा लामो खुट्टा भएकी सुन्दरी भिक्टोरोभना लिसिना (फिचर)
एजेन्सी । येकातेरिना भिक्टोरोभना लिसिना एक रूसी मोडल र पूर्व बास्केटबल खेलाडी हुन्। उनीसँग सबैभन्दा लामो खुट्टा भएका महिलाको लागि र सबैभन्दा अग्लो पेशेवर मोडेलको लागि २ गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड छ। उनको बास्केटबल करियरको दौडान सन् २००८ ग्रीष्म ओलम्पिकमा रूसी[…..]
दुष्ट पत्नी, झूटा मित्र र दुष्ट नोकरसँग बस्नु मृत्युको समान हो- चाणक्य
काठमाडौँ । आचार्य चाणक्य एक महान व्यक्तित्वका मानिस थिए जसले भारतीय इतिहासको मार्गलाई आफ्नो बुद्धिमत्ता र सामर्थ्यको बलमा परिवर्तन गरे । मौर्य साम्राज्यका संस्थापक चाणक्य प्रख्यात राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, धार्मिक गुरु र अर्थशास्त्री थिए । यति धेरै शताब्दीहरू बितिसक्दा पनि[…..]
प्रेमीकालाई यौन सम्पर्कमा उत्तेजित पार्न अपनाउनुहोस् यी फर्मुलाहरु !
प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । यौन सम्बन्धले दुई पार्टनरबीचको सम्बन्धलाई अझ न्यानो र बलियो बनाउन अहम् भूमिका खेल्ने गर्दछ । यौनपार्टनरबीच समझदारी नभई गरिएको सम्भोग सुखमय नहुने र खल्लो हुने हुँदा महिलाको सक्रिय सहभागिता पुरुषको पहिलो रोजाइ हुन्छ । शारीरिक सम्बन्धका बेला महिलालाई[…..]
नाइजेरियामा बकर ईदमा देखियो ५ सिंङ्गे दुर्लभ बोका, मानिसहरुको प्रतिक्रिया बडो अचम्मलाग्दो !
एजेन्सी । बोका बाख्रात यहाँहरुले दखिनै रहनुभएको होला । तर पाँच सींङ्ग भएको बोका हाल सोशल मीडियामा भाइरल बनिरहेको छ । हहिले सबैले यसलाई चर्चाको बिषय बनाइरहेको छ । सबै जना जान्न चाहन्छन् कि आखिर यस बोकाको टाउकोमा पाँच सिङहरु[…..]
एजेन्सी । बेलायतको सुसेक्सबाट एउटा एकदमै अचम्मको घटना बाहिर आएको छ । त्यहाँ एक वर्षको बच्चाले बटनको आकारको ब्याट्री निलेका छन् । यसपछि, बच्चालाई २८ अपरेसन पछि बल्ल बचाउन सकिएको छ । यस्तैमा घटनाको दुई बर्षपछि बच्चाको बुबाले उनको फोटोहरु[…..]
अर्बपति रिचर्ड ब्रान्सन आफ्नै यानमा चढेर अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने पहिलो व्यक्ति बने
एजेन्सी । आफ्नै यानमा चढेर अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने बेलायती अर्बपति रिचर्ड ब्रान्सन पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । ७१ वर्षीय ब्रान्सन हिजो (आइतबार) अमेरिकाको न्यु मेक्सिकोबाट आफ्नै कम्पनी भर्जिन ग्यालेक्सीद्वारा निर्मित यानमार्फत अन्तरिक्षमा पुगेका हुन् । उक्त यान पृथ्वीबाट ८८ किलोमिटर[…..]
एजेन्सी । एक व्यक्तिले दावी गरेका छन् कि उनी २३ मिनेटसम्म मरेका थिए र त्यहिबेला उनलाई नरकको गहिराइमा तानेर लगिएको थियो । जहाँ उसले खाडलमा जल्दै गरेको अनगिन्ति लासहरु देखे । आफ्नो डरलाग्दो परीक्षाको बारेमा वर्णन गर्दै बिल विसेले दाबी[…..]
हजूरआमालाई खुशी पार्न नातिनीले १३ बर्षसम्म तलबमा राखिन् नक्कली आमा, त्यसपछि जे भयो…
प्रकाशित मिति: २५ असार २०७८, शुक्रबार July 10, 2021 , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । तपाईंले चलचित्रमा देख्नुभएको होला कि प्रेमी वा प्रेमिका नक्कली आमाबाबु बनाएर विवाहको लागि सम्बन्ध बनाउन जान्छन् र पछि ती नक्कली आमा बुबाको गोप्य कुरा उजागर हुन्छ । यस्तैमा तपाईंहरु फिल्ममा नक्कली आमाबाबुको वास्तविकता देखेर धेरै हाँस्नुभएको पनि होला[…..]
२३ महिनाको रानी हेर्न बंगलादेशमा भीड
प्रकाशित मिति: २५ असार २०७८, शुक्रबार , संवाददाता: hina
काठमाडौं । बङ्गलादेशको एउटा गाई फर्ममा एउटा अनौठो गाईको बाछी रहेको छ जुन हेर्न भीड लागेको छ । २३ महिनाको सो गाईको बाछीको उचाई केवल ५१ सेन्टिमिटर रहेको छ भने वजन २८ किलो रहेको छ । रानी नाम गरेको अनौठो[…..]
केही गर्दा पनि नघटेको तौल सेक्सले घटाइदियो (रोचक)
काठमाडौँ । भारतमा एक यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ १५ दिनसम्मको दैनिक ३० मिनेट यौनसम्पर्कले एक युवतीको २ किलो तौल घटेको छ । ती युवतीले शुरु शुरुमा त आफुहरुलाई आफ्नै क्रियाकलाप पागलपना जस्तै लागेपनि ७ दिनपछि अनुहारमा चमक आएको[…..]